MAREYKANKA: “Asad iyo ciidankiisa waxay mar kale u adeegsanayaan shacabka Suuriya hubka kiimikada ah” – Balcad.com Teyteyleey
Warbixin uu so saaray Marayku gelinki danbe ee maalinimadi isniinta ayuu sheegay diyargrowgan in uu la mid yahay kii ay hore u qaadeen bishii afraad ee sanadkan, kaasoo ahaa weerer sun loo adeegsaday , islamarkaasina ay ku le’deen kumanaan shacab ah oo reer Suuriya ah.
Aqlka cad ayaa u digay Bashaar Al-Asad gelinkii danbe ee malinimadii isniinta , tasoo uu maraykanku sheegay in Bashaar iyo milatarigiisu ay aad uga shalaayi doonaan hadii ay fuliyaan hubka nucliyeerka ah ee ay ugogol xaarayaan.
Maraykanka ayaa intaasi ku daray in uu haysto sababo ku filan in uu ku rumaysto diyaargarowga socda ee Asad maleegayo.
Dhacdadan kadib ayaa Maraykanku uu amray in uu duqaymo ku qaado saldhigii hawada ee ciidamada Suuriya ee uu Asad horkacayo.
“Dawlada Maraykanka ayaa qeexday ujeedadan ay Asad iyo ciidankiisu ka leeyihiin diyaar garowgan in ay tahay hub kale oo kiimika ah oo ay donayaan in ay markale ku xasuuqaan shacabka Siiriya”, sidaasi waxaa yiri afhayeenka aqlka cad Sean Spicer.
The post MAREYKANKA: “Asad iyo ciidankiisa waxay mar kale u adeegsanayaan shacabka Suuriya hubka kiimikada ah” appeared first on Ilwareed Online.